August 14, 2020 1563
एउटा बा बाको माया आफ्नो सन्ता’न प्रति कस्तो हुन्छ ? त्यो त एउटा बुवालाई मात्र थाहा हुन्छ । कै’लाली घर भइ हाल काठमा’डौँमा ज्याला मजदुरी गर्दै आ एका अर्जुन बिक एक छोराका बाबु हुन् ।
श्रीमतीले छोरा ४ महिनाको हुँदा छोडेर गएपछि अहिले अर्जु’नले आफ्ना छोरालाई आमा र बाबा दुवै’ बनेर हुर्काई रहेका छन् ।
आमाको का’ख नपाएको छो’रालाई उनी आफैँ आमा बनेर काँधमा राखेर लुगाले बाँधेर काममा जान्छन् । छोराको उज्ज्वल भबिष्यका लागि दिन रात परिश्रम गरिरहेका छन् ।
अर्जुन बिक दैनि’क रुपमा यसरी नै आ’फ्नो सन्तान बोकेर ठेलामा समान ढुवानी सेवा गर्छन् । सन्ता’न प्रतिको अथाह मा’या तथा जिम्मेवारी एउटा बाबाको परिश्रममा देखिने रहेछ। ‬त्य’सको उदा’हरण हुन् अर्जुन । अर्जुन ले गएको गीतको भिडियो तल छ ।
यो पनि… साइक’ल चोरेरै भक्तपु’रमा तीन तले घर, यिनको चो’र्ने तरिका देखेर प्रह’री पनि च’कित !
प्रहरीलाई नै छक्क पार्ने एउटा घटना काठमा’डौंमा खुलासा भएको छ । एक युवकले साइकल चोरे’रै भक्तपुरमा तीन तलाको घर बनाए भन्ने सुन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । सुरुमा प्रहरीला’ई पनि यो वास्तविकता विश्वास गर्न कठिन भएको थियो ।
प्रहरीले ६ महिना देखि काठमाडौं र आसपा’सका साइकल चोरी गर्ने ब्यक्तिको खोजीमा लागेको थियो । तर लकडाउन पछि साइकल हराउने क्रम झन ब’ढ्यो । प्रहरीलाई थप चुनौती बढ्यो ।
तर जव एउटा सिसी’टिभी फुटेजमा देखिएको भिडियो’को सहारामा प्रहरी ति साइकल चोरी गर्ने ब्यक्ति समक्ष पुग्यो पत्या’उनै नसक्ने वास्तविकता खुलेको छ ।
ति युवाले साइकल चोरेर तिन तले घर समेत बनाइसकेका छन् । अहिले उन’को घरको तेस्रो तला’को काम ध’माधम भइरहेको छ । ति युवा हुन् सर्लाही घर भएका रमेश माझी उर्फ सुरेश ।
अहिले उनले चोरेका महंगा साइकल महान’गरीय प्रहरी वृत नयाँ बानश्वर वृत्तमा लहरै राखिएका छन् । उनी हिरास’तमा छन् । उनले काठमाडौंमा सडक र पार्किगं स्थ’लमा राखिएका महंगा साइकल चोरी गर्ने गरेका छन् । उनको यो सिलसिला निकै लामो समय देखि चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सर्लाहीको हरिवन नगर’पालिका–५ घर भएका सुरेशको चो री गर्ने तरिका पनि अच’म्मको छ । उनी विहानै घरवाट निस्कदा दुईवटा पेचकस लिएर निस्कन्छन् । साइकल भएको ठाउँमा जान्छन् उन’लाई ति साइकलको लक खोल्न २ मिनेट पनि लाग्दैन ।
महंगो साइकलको लक खो’ल्छन् अनि त्यही साइकल चढेर आरामले हिड्छन् । उनले त्यसरी चोरी गरेको सा’इकल बेच्ने ठाउँ पनि पत्ता लगाएका छन् ।
अहिले उनी भक्त’पुरमा बस्छन् । उनको घरच्याम्हासिंहमा छ । उनले कम्तीमा ७० हजार देखि २ लाख मुल्य पर्ने साइकल चो’रेर भक्तपुर नगरपालिका–९ मा लक्ष्मी सु’न्दर वासुले सञ्चालन गरेको ‘सुन्दर मोटरसाइकल वर्कशप’ मा बेच्ने गरेका छन् । सो वर्कसपमा पनि २४ वटा साइकलका लक प्रहरीले फेला पारेको छ ।
पक्राउ परेपछि आफ्नो घर देखा’उन आनाकानी गरेका सुरेशले अन्त्यमा प्रहरीलाई आफ्नो घर देखाए । उनको घर दे’खेर प्रहरी छक्क परे । ४४ वर्षका सुरेश’को च्याम्हासिंहमा रहेको घरमा अहिले तेस्रो तलाको काम भइरहेको ।
प्रहरी अनुसन्धा’नमा सुरेशले साइकल चो’री गरेरै तीन तला घर बनाएको खुलेको छ । उनको त्यती ठूलो घर बनाउने अन्य कुनै आम्दानी नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अर्जुनले गाएको गीत हेर्नुहोस्…
Prevगोंगबु ह’त्या प्रकरण: कल्पनाको कर्तुत’ले अर्काको जग्गा कमाएर खाने बाबु’आमा पनि कष्टमा..
Nextभाइरल अर्जुन विकले थाले यस्तो काम, भाबुक हुदै यसो भने (भिडियो सहित)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (72412)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (63346)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (63281)